Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Jebinta Wararka Qadar » Qatar Airways waxay ku biiraysaa Barnaamijka IBA ee Qalalaasaha Aware
Airlines • Airport • Wararka Ururada • Jebinta Wararka Caalamka • Jebinta Wararka Qadar • Jebinta Wararka Safarka • Safarka Ganacsiga • News • Waajib ah • Technology • Dalxiiska • Gaadiidka • Warka Safarka Safarka • Wararka kala duwan
Qatar Airways waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee Bariga Dhexe ee ka qaybqaadata hindisaha Turbulence Aware markii la bilaabay mashruuc tijaabo ah bishii Diseembar 2018.
Nabadgelyada iyo joogtaynta bay'ada oo ah mudnaanta koowaad.
Waa kii ugu horreeyey uguna ballaarnaa ee xog -ogaalnimada qalalaasaha ee Bariga Dhexe.
Wadaagista xogta ku saabsan qalalaasaha waxay ka caawin kartaa warshadaha diyaaradda inay yareeyaan qiiqa kaarboonka.
Qatar Airways iyo Ururka Caalamiga ee Gaadiidka Cirka (IATA) ayaa ku dhawaaqday in Qatar Airways ay noqon doonto diyaaraddii ugu horreysay ee Bariga Dhexe ku biirta madasha IATA Turbulence Aware.
IATA's Turbulence Aware waxay ka caawisaa shirkadaha diyaaradaha inay yareeyaan saameynta qulqulatada, sababta ugu weyn ee dhaawacyada rakaabka iyo shaqaalaha iyo qiimaha shidaalka oo sarreeya sanad walba, iyadoo la isu geeyo lana wadaago xogta qalalaasaha ee aan la qarxin oo ka imanaya duulimaadyo badan oo ka qaybqaata iyo kumanaan duulimaad oo maalinle ah. Waqtiga dhabta ah, xogta saxda ahi waxay u saamaxaysaa duuliyayaasha iyo hawlwadeennada inay doortaan dariiqyada duulimaad ee ugu habboon, iyagoo ka fogaanaya qalalaasaha iyo inay ku duulaan heerar aad u wanaagsan si loo kordhiyo hufnaanta shidaalka sidaasna loo yareeyo qiiqa CO2.
Qatar Airways waxay ahayd diyaaraddii ugu horreysay ee Bariga Dhexe ee ka qayb-qaadata hindisaha Turbulence Aware markii loo bilaabay mashruuc tijaabo ah bishii Disembar 2018. Turbulence Aware ayaa tan iyo markaas ku ballaarisay goob si buuxda u shaqeyneysa iyada oo in ka badan 1,500 ay ka warbixiyeen diyaarado wadaaga xogta qalalaasaha waqtiga-dhabta ah. Ku dhawaaqista maanta ee Qatar Airways waxay ku qalabeysay 120 diyaaradood oo leh madal Turbulence Aware, iyadoo qorshuhu yahay inay ballaariso maraakiibteeda inteeda kale.
Madaxa Fulinta Kooxda Qatar Airways, Mudane Mr. Akbar Al Baker, ayaa yiri: “Iyada oo nabadgelyada iyo joogtaynta bay’ada ay tahay ahmiyadeena ugu sareysa, waxaan muujineynaa sida ay nooga go’an tahay xagga duulimaadyada mas’uuliyadda leh. Waxaan sii wadnaa inaan hal -abuurno sidii mid ka mid ah shirkadaha duulimaadyada ee ugu horreeya adduunka annagoo qaadanayna xalkan cusub oo isku daraya farsamada iyo xogta weyn ee qorshaynta duulimaadka oo hufan ma aha oo kaliya si loo hubiyo safar sahlan, laakiin sidoo kale si loo yareeyo gubashada shidaalka, taas oo iyaduna hoos u dhigaysa qiiqa kaarboonkayaga. Si duulimaadku u noqdo mid nabdoon oo waara, warshadaha diyaaraduhu waa inay ka faa'iidaystaan ​​hal -abuurnimada dhijitaalka ah, oo ay wada shaqeeyaan si ay u wadaagaan xogta qalalaasaha ee saadaalinta saxda ah. ”